इटहरीका मेयरः मान्छे कुट्छन् विकास भन्दै गाउँ गाउँ घुम्छन्
नवराज कुँवर काठमाडौ, २२ जेठ
अहिले चर्चामा छन्, इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी । धेरैलाई उनको अभिव्यक्ति, व्यवहार र शैली अचाक्ली अनौठो लागेको छ ।
के पहिलेदेखि नै उनी यस्तै स्वाभावका थिए त ? धेरैमा यस्तो जिज्ञासा उब्जिएको हुन सक्छ ।
२०७५ साल माघतिरको कुरा हो । मेयरसँग कुराकानी गर्नुपर्यो भनेर समय लिन बिहान ७ बजे नै फोन गरें । उनको फोन उठेन । उपमेयर लक्ष्मी गौतमसँग मेयर चौधरीको सहयोगीको सम्पर्क नम्बर मागेर फोन लगाएँ ।
उनले फोन उठाएर भने, ‘मेयरसा’प त पचरुकीभन्दा माथि काव्यवाटिकामा हुनुहुन्छ ।’
‘एकाबिहानै मेयर त्यहाँ किन पुगे त ?’ मभित्र जिज्ञासा पलायो । तत्कालै म त्यहाँ पुगें । मेयर हरेक दिन बिहान जनताको घर–घर जान थालेका रहेछन् । उनले त्यहाँ पुगेर जनताका समस्या सुन्ने र आफूले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउँदा रहेछन् ।
खासगरी जनताका तत्कालीन समस्याबारे नै उनले सोधीखोजी गर्ने गरेका रहेछन् । यो कुरा उनका सहयोगीबाट थाहा पाएँ ।
त्यो दिन उनीसँग सामान्य कुरा भयो । उनी भोलिपल्ट त्यसैगरी जनतामाझ जान्छन् या जाँदैनन् भन्ने अर्को जिज्ञासा पलायो । मैले भोलिपल्ट फलो गरें ।
भाेलिपल्ट त्यही समयमा उनी लविपुरमा भेटिए । त्यहाँ पनि उनी जनताको घरमै भेटिए ।
‘आहा ! गज्जबको मेयर, घरघर पुगेर जनताका समस्या बुझ्न खोज्नु, सामाधान गर्न खोज्नु भनेको चानचुने कुरा होइन,’ मैले सोचें । केही स्थानीयसँग कुराकानी गर्दा मेयरबारे राम्रै प्रतिक्रिया दिए ।
इटहरीको मुख्य चोकमा अटो रिक्सालाई छिर्न नदिने नियम लागू गरेको सन्दर्भमा मैले उनीसँग कुरा गर्न खोजेको थिएँ । अटोरिक्साबारे उनले कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए । चोकमा दुर्घटना बढेको र यसलाई कुनै हालतमा रोक्ने उनले बताएका थिए ।
त्यसयता उनीसँग मेरो सम्पर्क भएको थिएन । पत्रकारविरोधी अभिव्यक्ति निरन्तर दिन थालेपछि मंगलबार मैले उनलाई फोनमा सोधें, ‘मेयरसा‘प कडा आउन थाल्यो त !’ उनले त्यही रिक्सा प्रकरणजस्तै उत्तर दिए, ‘पत्रकारले जे पायो त्यही लेखे, मैले राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन, जनताको काम प्रभावित भएको छ । म कसैलाई पनि छाड्नेछैन ।’
उनी बदलिएका रहेनछन् । बरु अझै कडा भएछन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहार देख्दा उनी क्रूरतातिर उन्मुख भएका रहेछन् भन्ने महसुस भयो ।
इटहरीका पत्रकार रमेश उदयका अनुसार तत्कालीन एमालेको पार्टी घोषणापत्र सार्वजनिक समारोहमै पनि चौधरी पत्रकारले प्रश्न गर्दा रिसाएका थिए ।
सोधेका प्रश्नमा लामो उत्तर दिएपछि ‘अलिक सटकटमा भन्नुपर्यो’ भन्दा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंले पढ्नुभएको छैन ? जाँचमा एउटा सानो क्वेसनको तीन पानासम्मको उत्तर लेख्नुपर्छ ।’
त्यतिबेलै उनी बोलीका कारण विवादमा आएका थिए ।
उनी आलाकाँचा व्यक्ति होइनन् । २०४९ सालमा उनी हाँसपोसा (अहिले इटहरीभित्र छ)का अध्यक्ष बनेका थिए । २०५४ सालमा दोस्रोपटक उनी हाँसपोसा गाविसको अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भए ।
जनप्रतिनिधिको हैसियतमा उनले १० वर्ष काम गरे । यो समयमा उनले जनताको मन जिते । अहिले पनि हाँसपोसा क्षेत्रका नागरिक मेयर चौधरीले दुई कार्यकालमा इमानदार भएर काम गरेको बताउँछन् ।
त्यसपछि एमाले राजनीतिमा सक्रिय उनले जिल्लाको शीर्ष नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । झन्डै दुई दशक उनले जिल्लाको कमान्ड हाँके ।
२० वर्षपछि भएको स्थानीय चुनावमा उनले फेरि बाजी मारे । इटहरी नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित बने ।
उनी मेयरमा निर्वाचित भएर काम गर्न थालेको केही समयलगत्तै एउटा प्रकरण उब्जियो, सीएफएल बल्कोब खरिदमा ६० लाख बढी भ्रष्टाचार ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले बल्कोब सेट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको घटनामा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि मेयरमाथि थुप्रै नैतिक प्रश्न उठाइए ।
गाविस अध्यक्ष हुँदा उनले गरेका कामले पुष्टि गर्छ कि उनी भूमिको महत्त्व बुझेका व्यक्ति हुन् त्यसैले मेयर बनेपछि उनले खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ पूर्णतया बन्द गराउने नीति लिन खोजे ।
कुराकानी क्रममा भनेका थिए, ‘यही कारण जग्गा व्यापारीहरु र प्लटिङवालाहरुले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने गिरोहले पनि खुबै दुःख दिएका छन् ।’
उनी मेयर भएपछि विपक्षीले होस् वा उनकै पार्टीका कतिपय नेता, नगरपालिकाभित्र कर्मचारीले गरेका भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई जोडेर मेयरको चर्को आलोचना गरे ।
मेयर चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै इटहरी १९ का वडासचिव मनोज दाहाल र उपमहानगरपालिकाका सब ओभरसियर राम खड्कामाथि हातपात गरे ।
उनले ओभरसियर खड्कालाई कार्यालयबाट गलहत्याएर ‘घुस खाने कर्मचारीलाई यहाँ प्रवेश छैन’ भन्दै गेटबाटै निकालिदिए ।
उनले गरेको यो काम कानुनसम्मत थिएन त्यसैले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाए । मेयरमाथि प्रश्न उठ्यो, जुन स्वाभाविक थियो ।
चुनावमा द्वारिकलालले टिकट पाउनुहुँदैन भन्ने तत्कालीन एमालेका नेताले पनि मेयरमाथि दबाब बढाए ।
यी सबैबाट मेयर रन्थनिए । आफूसँग थोरै असहमति राख्नेलाई उनले विपक्षी र विरोधी देख्न थाले । इटहरीका कतिपय पत्रकारलाई उनले निरन्तर दुर्व्यवहार गर्न थाले ।
दुर्व्यवहार भएपछि कर्मचारीसँगै पत्रकार पनि आन्दोलित बने । उनीमाथि दबाब बढ्यो । उनै अझै कठोर हुन थाले । सबैलाई ठीक लगाउँछु भन्ने थाले ।
उनको आत्मविश्वास हेर्दा लाग्छ, उनी मितव्ययी छन् । भ्रष्ट व्यक्तिले आत्मविश्वास र हठ राख्न सक्दैन । अहिले कुनै आर्थिक अनियमितताबारे कुनै ‘खोट’ उनलाई नलागेकोले हामीलाई यस्तो लागेको हुन सक्छ ।
कर्मचारीपछि अब उनले पत्रकारलाई पनि लोपारिदिए । दुर्व्यवहार गरे । एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिए ।
अब उनी थप कठोर बन्दै गए । ‘म मितव्ययी छु, मेरो विरोध गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ’ भन्दै हिँड्न थाले, कतिपय त व्यवहारतः देखाए ।
विगतका कुरा बिर्सने हो भने पनि पत्रकारको नाकको डाँडी भाँच्न एक करोड छुट्याएको छु भन्नु र पत्रकारलाई ठेगान लगाउन कसैलाई सुपारी दिएको छ भन्नुले उनको साख निकै तल झारिसकेको छ ।
त्यो पदलाई नसुहाउने अत्यन्तै अमर्यादित र खेदजनक शब्द उनले थुप्रैपटक प्रयोग गरिसकेका छन्, जुन सबैसामु आइसकेको छ ।
कर्मचारी गलत छन् भने उनीहरुलाई ठेगान लगाउन कानुन छ । तर, उनी आफैं हातपातमा उत्रिए ।
कतिपय पत्रकार पनि गलत हुन सक्छन् । जे मन लाग्यो, त्यही लेख्ने, रिस साँध्ने र बिनाप्रमाण कसैको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।
यति भन्दै गर्दा फेरि नियम र कानुनको रक्षा गर्नुपर्ने र पालना गराउनुपर्ने पदमा आसीन व्यक्तिले कानुन हातमा लिने कुरा गर्नु, पत्रकारलाई ठेगान लगाउन सुपारी देको छु भन्नु र कसैमाथि हातपात गर्नु अत्यन्तै अमर्यादित र खेदजनक विषय नै हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानअनुसार भएको चुनावबाट चुनिएको जनप्रतिनिधिले ‘डिक्टेटर’ हुन्छु भन्नु आपत्तिजनक मात्र होइन, संविधानकै बर्खिलाप हो ।
चौधरीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्नु सराहनीय हो । तर, शैली सार्है अराजक भयो । उनले तत्काल यस्तो ‘हिटलर’ शैली सुधारेनन् भने राजनीतिक यात्रा ‘ब्रेक’ लाग्न सक्छ । हिजो जनताको मन जितेका उनलाई स्खलित हुन कति पनि समय लागेन । तत्कालै उनले आफूलाई सुधारेनन् भने उनको राजनीतिक जीवनमा ठूलै क्षति हुन सक्छ । सुधार्ने भनेको उनको ‘जंगे शैली’ र कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति हो ।
मेयर ‘डामेर छाडेको साँढे’जस्तो हुँदा उनको पार्टी नेकपा मूकदर्शक भएर बसेकोजस्तो देखिएको छ । यो पनि लाजमर्दो कुरा हो । आफ्नै शैली र व्यवहारले उनी झन् झन् समस्यामा पर्दै गएकाे देखिन्छ । यस्तो समस्याबाट निकाल्न नेकपाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २२, २०७६, ०७:०५:००
म बालश्रमिक हुँ दाइ
आहा ! त्यो बालापन
विवादका बीच बहालवाला मन्त्री लिएर किन उड्यो बुद्ध एयर ?
‘साहसी’ वडा अध्यक्ष
चिनियाँ ह्याकरको निशानामा नेपाली बैंक, अधिकांश बैंकका एटिएम बन्द
भिख माग्दामाग्दै बलिउड स्टार